搜索 Abhisambuddha 的结果：
abhisambuddha：a. [abhisambujjhati 的 pp.] 已現等覺的，有現覺的.
abhisambuddha：a. [abhisambujjhati の pp.] 現等覚せる，現覚ある.
Abhisambuddha，（ [abhisambujjhati] 的【过分】），证到最高智慧。
abhisambuddha：[pp. of abhisambujjhati] gained the highest wisdom.
Abhisambuddha，[pp. of abhisambujjhati] （a） （pass.） realised，perfectly understood D.III，273； S.IV，331； It.121. an° not understood M.I，71，92，114，163，240. -- （b） （med.） one who has come to the realisation of the highest wisdom，fully-awakened，attained Buddhahood，realising，enlightened （in or as to = Acc.） Vin.I，1； D.II，4； M.I，6 （sammāsambodhiṁ）； S.I，68，138，139 & passim PvA.94，99. （Page 71）
Abhisambuddha：The name given to the stanzas which illustrate and summarise the Jātaka stories，when such stanzas are mentioned as having been spoken by the Buddha himself，either after the Enlightenment or before it，while he was yetaBodhisatta.
See Buddhist Birth Stories，Introd.
ABHISAMBUDDHA：[pp] của abhisambujjhaṭi
（၁） （က） သိပြီးသော၊ ထိုးထွင်း၍ သိပြီးသော၊ မျက်မှောက်ပြုပြီးသော၊ ရောက်ပြီးသော၊ ရပြီးသော။ （ခ） သိသော၊ ထိုးထွင်း၍ သိသော၊ သူ။ （ပု） （ဂ） ရှေးရှူမျက်မှောက်အဖြစ်အားဖြင့်ကောင်းစွာသာလျှင် အလုံးစုံသော တရားတို့ကို သိတတ်သော ဘုရား။ （ဃ） သိတတ်သော။ （င） သစ္စာလေးပါးကို-သိသော-ထိုးထွင်း၍သိသော-မျက်မှောက်ပြုသော။ （၂） သိအပ်သော၊ ထိုးထွင်း၍ သိအပ်သော၊ မျက်မှောက်ပြုအပ်သော။ （သစ္စာလေးပါး စသည်）။။ အနဘိသမ္ဗုဒ္ဓ，ပဌမဘိသမ္ဗုဒ္ဓ-တို့လည်းကြည့်။
abhisambuddha：အဘိ-သမ္ဗုဒ္ဓ（တိ） （တီ-ကိတ်） （အဘိ+သံ√ဗုဓ်+တ）
သစ္စာလေးပါးတရားကို သိပြီးသည်။ ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးသည်။
与 Abhisambuddha 相似的巴利词：